कोरोना संक्रमितको सूचना नै गलत, कहाँ चुक्यो सरकार ? जिल्लामा भनिएका धेरै संक्रमित काठमाडौंकै
दिनेश गौतम काठमाडाैं, ८ जेठ
सर्लाहीकी १८ वर्षीया युवतीमा कोरोना पोजिटिभ भएको सरकारले पुष्टि गर्‍यो । त्यसपछि कोरोना फैलिएको जिल्लाभर भुसको आगोजसरी फैलियो ।
पछि पत्ता लाग्यो, ती युवतीको बसोबास सर्लाही नभई काठमाडौंको कपनमा रहेछ ।
उनको कन्ट्याक्ट सर्लाहीमा हुँदैन । उनी जहाँ बसेकी छिन्, त्यही वरिपरि हुन्छ ।
दाङको तुलसीपुरमा पनि कोरोना संक्रमण भएको सूचना आयो । दाङमा होहल्ला मच्चिएपछि नगरप्रमुखले दाङको नभएको सूचना नै निकाल्नुपर्‍यो । पछि टिचिङ अस्पतालको स्वास्थ्यकर्मी भन्ने हल्ला चल्यो । टिचिङका डाक्टर, नर्स र कर्मचारीमा डर र त्रास फैलियो ।
बर्दियामा एक पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ भनेर सार्वजनिक भयो । बर्दियाको कुन ठाउँको हो भनेर खोज्न थालियो । तर, उनी काठमाडौंकाे कालीमाटीका मासु व्यवसायी रहेछन् ।
उनको स्थायी ठेगाना बर्दिया रहेछ । उनको कन्ट्याक्ट पत्ता लगाउन गाह्रो भयो । ढिला कन्ट्याक्ट हुँदा उनको सम्पर्कमा रहेका मान्छेबाट अरुमा कोरोना सर्ने जोखिम धेरै हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले लमजुङका ३ वर्षीय बालकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि गर्‍याे । लमजुङको भनेर हल्ला गरियो । तर, उनी काठमाडौंकाे वनस्थली बस्दै आएका रहेछन् । ती बालकमा कोरोना संक्रमण भएको परिवारले थाहा पाए पनि सरकारले ढिला गरी मात्र थाहा पायो ।
बाँकेका एक जना पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखियो भनेर पुष्टि गरियो । तर, उनी काठमाडौंस्थित ठूलो भर्‍याङमा फर्निचरमा काम गर्ने व्यक्ति रहेछन् ।
बिहीबार (आज) स्वास्थ्य मन्त्रालयले झापाको कचनकवल गाउँपालिका– ८ मा संक्रमण पुष्टि भएको विज्ञप्ति जारी गर्‍याे । तर, सो गाउँपालिकामा ७ वटा मात्र वडा छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई दिनअघि ललितपुरका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गर्‍याे । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका बासिन्दा त्रसित छन् । तर, ती युवा कुन स्थानीय तहका भनेर अझैसम्म सूचना दिइएको छैन । धेरै स्थानीय तहका प्रमुखसमेत यस विषयमा अनभिज्ञ छन् ।
भोजपुरमा एक संक्रमितलाई गाउँमा जान दिइएन । स्थानीयले उनको परिचय थाहा पाएर गाउँमा जान नदिएका हुन् । निको भएका व्यक्तिलाई समाजमा नराम्रो नजरले हेर्ने भएकाले उनीहरूको परिचय गोप्य राख्नु राम्रो हो ।
यही ३ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बर्दियाको नार्खुमा १ जना पुरुष भेटिएको बतायो । तर, बर्दियामा नार्खु भन्ने ठाउँ नै छैन । सोही दिनको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुलेटिनमा सिरहाकाे सखुवा– १९ निवासी ३० वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको भनियो । तर, सखुवामा ५ वटा मात्रै वडा छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको गलत तथ्यांकका कारण सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ ।संक्रमितको ठेगाना गलत दिने, संक्रमण नै नभएको स्थानमा संक्रमित भेटिएको सूचना प्रवाह गरिएका कारण सर्वसाधारण त्रासमा छन् ।
परिचय गोप्य नै राख्नुपर्छ
परिचय खुलाउने हो भने संक्रमितमाथि आक्रमणको प्रयाससमेत हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले संक्रमितको परिचय गोप्य नै राख्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यहाँ यति संक्रमित भेटियो । त्यहाँ उति भेटियो भनेर हरेक दिन ब्रिफिङ गर्दा र बुलेटिनमा निकालेको ठेगानाले भने झुक्याइरहेको छ ।
संक्रमित एक ठाउँमा हुन्छ । अर्को ठाउँको सूचना निकाल्दा त्यस क्षेत्रमा डर र त्रासको आतंक हुने गरेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सरकार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चुकिरहेको छ ।
स्थायी ठेगाना खुलाउन आवश्यक छैन
संक्रमितको स्थायी ठेगाना पनि खुलाउन आवश्यक नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘संक्रमित जहाँ बसेको छ, त्यहीँको ठेगाना खुलाउँदा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले भने, ‘विदेशमा संक्रमितको नाम पनि खुलाइएको हुन्छ । यहाँ घृणाको नजरले हेर्ने र व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने भएकाले परिचय लुकाइएको छ । गोप्य राखिएको छ । यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ ।’
बसिरहेकोे ठेगाना सार्वजनिक गर्नुपर्छ
संक्रमित व्यक्ति जहाँ बसेको छ, त्यहीँको ठेगाना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘स्थायी ठेगाना भन्नु जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘यति वर्षका यो ठाउँमा बस्ने, यो ठाउँमा काम गर्ने भनेर सूचना निकालियो भने थप सचेतना अपनाउन सहयोग मिल्छ । अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अहिले जो जहाँ बसेको छ, त्यसैलाई आधार मान्नुपर्छ । यो रोग व्यक्ति जहाँ छ, त्यही वरिपरिकोलाई सर्ने हो ।’
काठमाडौंमा संक्रमित कम देखाउन गलत ठेगाना
काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या कम देखाउन सरकारले ठेगाना स्थायी राखेको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले काराेना संक्रमणकाे 'कन्ट्रोल' काठमाडौंमा त गर्न सकेन, उपत्यकाबाहिर झन् के गर्न सक्ला र ? भन्ने प्रश्न आउँछ भन्ने डरले यस्तो गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले काठमाडौंमा संक्रमित देखाउन चाहेकै छैन । परीक्षण पनि कम भएको छ ।’
के हो कन्ट्याक्ट टेसिङ ?
कुनै व्यक्तिलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ भने त्यो व्यक्ति कहाँ बस्ने हो, कहाँबाट आएको थियो, त्यो व्यक्ति को–कोसँग सम्पर्कमा पुगेकाे थियो, ती मान्छेलाई पनि सरेको छ छैन भनेर सबैसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तै: कुनै व्यक्ति जहाजबाट आएको हुन्छ । त्यो व्यक्ति कुन देशबाट आएको थियो ? कुन जहाज थियो ? कति यात्रु थिए ? त्यो सबै हिस्ट्री निकालिन्छ ।
कोरोना भाइरस पाेजिटिभ व्यक्तिले पहिले कसलाई भेट्यो र त्यो भेटेको मान्छेले फेरि अरु कसलाई भेट्यो ? सुरुदेखि अन्तिम व्यक्तिसम्म पुगेर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था, यात्रा र सम्पर्क विवरण उतार्नुलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनिन्छ ।
स्थानीय तहमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरुमा टिम बनाएर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकाले गर्दै आएको थियो । विदेशबाट आएकामा संक्रमण देखिएपछि त्यसैका लागि महाशाखाले गाइडलाइन बनाएको थियो । तर पछि समुदायमा पनि देखिन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्कै गाइडलाइन बनायो ।
‘सुरुमा केन्द्रीय लेबलमा मात्र थियो,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रध्वज अधिकारीले भने, ‘अहिले स्थानीय तहमा पनि बनाइएको छ ।’
उनका अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्य गर्न गाउँपालिकाका लागि एउटा टोली, नगरपालिकाका लागि दुईवटा टोली, उपमहानगरका लागि तीनवटा टोली र महानगरका लागि ५ वटा टोली बनाइएको छ ।
कसरी हुन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ?
व्यक्तिको स्याम्पल ल्याबमा आउँछ । ल्याबमा आएको स्याम्पलको परीक्षणपछि पोजिटिभ केस आएमा त्यसको विवरण इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकामा आउँछ ।
महाशाखामा १७ वटा टोली छन् । त्यो टोलीले काम सुरु गर्छ । संक्रमित कुन जिल्लाको हो ? अहिले कहाँ बस्छ ? कुन स्थानीय तहको हो भन्ने पत्ता लगाएर महाशाखाले स्थानीय तहमा विवरण पठाउँछ । अनि स्थानीय तहमा रहेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टाेलीले संक्रमित खोज्न थाल्छ ।
‘आफ्नो क्षेत्रमा पोजिटिभ केस आयो भने खोज्ने, संक्रमितलाई अस्पताल लैजाने, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकालाई क्वारेन्टाइनमा लैजाने र आवश्यक परे परीक्षण गराउने काम स्थानीय तहको हो,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे प्राविधिक सहयोग महाशाखाले पनि गर्छ ।’
स्याम्पल दिँदा गलत ठेगाना दिएकाले समस्या
अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै ठेगानाको छ । सरकारले एक ठाउँको भनेर संक्रमितको सूचना निकाल्छ । तर, ऊ अर्कै ठाउँको हुन्छ ।
व्यक्तिले स्याम्पल दिँदा सही ठेगाना नदिएकाले समस्या आएको प्रशासक अधिकारी बताउँछन् ।
‘स्याम्पल संकलन गर्दा अस्थायी, स्थाई ठेगना लिइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिले ठेगाना, सम्पर्क नम्बर गलत दिँदा समस्या भएको हो ।’
स्थायी ठेगाना पनि आवश्यक
‘व्यक्तिले स्याम्पल संकलनका क्रममा स्थायी ठेगाना उल्लेख गर्ने तर अहिले बसेको उल्लेख नगर्ने पनि पाइयो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय काठमाडौंमा बस्ने भए पनि जिल्लमा पनि पुगेको हिस्ट्री धेरै छ । त्यसैले स्थायी ठेगाना पनि आवश्यक छ ।’
घृणा र तिरस्कारको भयले गलत ठेगाना र नम्बर
अधिकारीका अनुसार स्याम्पल दिँदा ठेगाना र नम्बर सही दिने हो भने समस्या आउँदैन । समाजमा यो रोगलाई ‘नकारात्मक दृष्टिले हेरिएको छ । गाउँठाउँका लागि अभिशाप भन्ने हल्ला छ । यसले असर गरेको हो । यो समान्य रोग हो । घृणा र तिरस्कारको भयले गलत ठेगाना र नम्बर दिइएको पाइएको छ,’ उनले भने ।
परिवारलाई असर पर्ने चिन्ता
आफूलाई पोजिटिभ देखिएमा परिवारले अनावश्यक दु:ख पाउने भएकाले पनि व्यक्तिले ढाँट्ने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘संक्रमित काठमाडौंमा हुन्छ । यो बीचमा ऊ परिवार भेट्न गाउँ पनि पुगेको हुन्छ । अनि काठमाडौं आएर परीक्षण गर्दा परिवारको हिस्ट्री ढाँट्ने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा सबै परिवार क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ र दैनिकीमा असर पर्छ भनेर ढाँट्ने गरेको पाइएको छ ।’
सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ
अहिलेसम्म जति पनि पोजिसिट केस छन्, ती सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको उनले बताए । ‘सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘खोतल्दै जाँदा थप भेटिने हो । ठूलो जालो हुन्छ ।’
ट्रेस कसरी गर्ने ?
पाेजिटिभ भएको व्यक्तिको नम्बर लिने । त्यो सम्पर्क नम्बरबाट त्यो व्यक्तिलाई फोन गर्ने । त्यसपछि ऊसँग सम्पर्क भएका सबैलाई फोन गर्ने वा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा जानकारी गराउने ।
सम्पर्कमा आएकाको फोनबाट र सम्पर्कमा नआएमा भेटेर पनि ट्रेसिङ गरिन्छ । पाेजिटिभ व्यक्तिलाई भेटेपछि उसले सुरुदेखि अन्तिमसम्म भेटेको व्यक्तिहरूको लिस्ट बनाउने । त्यही आधारमा उनीहरूको ट्रेस उतार्ने हो ।
एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा छिटो सर्ने भएकाले यसलाई रोकथाम गर्न नै ट्रेसिङ गर्ने हो । व्यक्तिव्यक्ति हुँदै समुदाय र देशभर नै फैलिन सक्ने भएकाले ती व्यक्तिलाई सुरुमै नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखियो भने अरुलाई सर्न पाउँदैन । त्यसैले ट्रेसिङ गरिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ८, २०७७, १४:४६:००